Home Wararka Qaar kamida ragii lagu eedeyay dilkii Gud. Dhaga-juun oo la sii...
Qaar kamida ragii lagu eedeyay dilkii Gud. Dhaga-juun oo la sii daayay
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa Maanta oo sabti ah waxaa ay mar kale dib u bilowday dhageysiga kiiska dilkii loo geystay Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan ee Gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhaga-juun. Fadhiga ay ka socoto Maxkamadda ayaa waxaa ku sugan Saraakiil ka tirsan Maxkamadda Ciidamada, rag loo heysto dilka marxuumka oo ay Saraakiil Booliis ah ku jiraan, Ehelada Marxuumka iyo xubno kale.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa sii deysay laba kamid ah 7 Askari oo ka tirsan Booliska dowladda Federaalka oo ay ku jiraan Saraakiil, kuwaasi oo loo heysto inay ku lug lahaayeen dilkii loo geystay Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan.
Labada askari ee lasii daayey ayaa kala ah Cabdiraxmaan Isaaq Cabdullaahi iyo Xasan Abuukar Maxamuud, waxayna ka mid ahaayeen todoba askari oo loo xiray kiiska dilkii guddoomiyaha.